China Ichi chiyero hachiwanikwe pamota! Nehurombo, vanhu vazhinji havazivi nzira yekuishandisa iyo fekitori nevagadziri | Jiaye
Iyi chiyero haisi kuwanikwa pamota! Nehurombo, vanhu vazhinji havazivi maitiro ekuishandisa
Zvino izvo varidzi vemota zvechokwadi havana kujairika kunaJack, chave chinja chinja, Jack kazhinji inogadzirwa neyemhando yepamusoro alloy simbi zvinhu, pane zvakafanana zvigadzirwa zvinogara yakasimba, senge rudzi rwevanowanzoshandiswa kusimudza maturusi, ruoko pamusoro wepamusoro nzvimbo yakaderera, inonyanya kukoshesa iyo lever nheyo inorema, saka inogona kushandiswa zvakanyanya muzvikamu zvakasiyana. Kune iyo novice, iyo yekutanga shanduko yevhiri rekusevha inogona kuve yakaoma zvechokwadi, saka jack inofanira kushandiswa sei?
Kune mhando mbiri dzevakajaira jack jacks, imwe ndiyo yeiyo rack jack, imwe ndiyo herringbone chimiro uye dhayamandi chimiro. Rimwe racho ndere screw jack. Kana tikashandisa jack, tinofanirwa kutanga tagadzira mota, kudzivirira mota yakasimudzwa isina kugadzikana, yarova pasi, ichikuvadza vanhu. Panguva ino, isu hatigone kufuratira nzira dzekuyambira dzekudzivirirwa, kana kuisa makona matatu ekunyevera mumota mushure mechinhambwe.
Kana isu toshandisa iyo jack, isu tinofanirwa kutarisisa pasi, sezvinobvira kusarudza yakakodzera kuti iyo jack jack ishandise. Kana mota iri muvhu nyoro uye pasina nzira yekutsvaga yakasimba uye yakatwasuka nzira yekugadzirisa jack, tinogona kuisa yakakura uye yakaoma tsigiro pasi pejena. Panguva imwecheteyo, mukushandiswa kwaJack, isu tinofanirawo kutarisisa huremu hwakanyanya hwe jack, kana simba rinotsigira harina kukwana, zvichitungamira tsaona.
Mota yega yega yakarongedzwa neJack yekutsigira, kusimudza zvikamu Jack inofanira kutsigirwa nekisasi yekutsigira, kana zvisiri izvo zvakaoma kuchengetedza mota, asi zvakare nyore kukuvadza kuna Jack, yakakuvadzwa zvakanyanya zvakanyanya kana kunyange chassis. Just in case, tikashandisa jack, tinogona kuisa tirera pasi pemota kwezuva rinonaya.
Mukati mekushandisa jack, iyo yekusimudza kushanda inofanirwa kunge yakatsiga uye inononoka. Nekuti kana tikasimudza simba rekushanda zvakanyanya kukurumidza, zvichave nyore kuwana Jack defform haigoni kana kushandisa chakare.
Nguva yekutumira: Nov-23-2019
Car creeper , Repair Tools , 3ton Hydraulic Garage Jack , Hydraulic Garage Jack 3ton , Zvishandiso Zvemotokari, Hydraulic Garage Jack ,